घरमा साङ्लाले हैरान गरेको छ भने अपनाउनुहोस् यी उपाय - eNepal
घरमा साङ्लाले हैरान गरेको छ भने अपनाउनुहोस् यी उपाय
by enepal २०७८, १३ जेष्ठ बिहीबार 263
चितवन, जेठ-१३। साङ्ला भगाउन या मार्नका लागि बजारमा थरिथरिका विषादी पाइन्छन् । तर यी वि षा दी स्वास्थ्यका लागि हा’निका’रक हुन्छन् । घरमा साना बच्चा छन् भने यस्तो वि ष होइन, घरेलु उपाय नै अपनाउनुहोस् । साङ्लाहरुको बास नै भान्सामा खाने कुरा भएको ठाउमा हुने गर्दछ । घरमा ओसको मात्रा बढी हुँदा साङ्लाहरुलाई सजिलो हुन्छ । साङ्ला बाट छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस यी घरेलु तरिकाः-
साबुनको झोल – साङ्ला खत्तम पार्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय साबुनको झोल हो । साबुन या स्याम्पुको झोलले सबैभन्दा छिटो र सजिलो किसिमले साङ्ला म र्द छन् । साङ्लाको शरीरमा साबुनको झोल परेपछि यसले बाहिरबाट हावा लिन पाउँदैन । श्वास फेर्न छालाको सहाराले हावा लिने भएकोले शरीरमा साबुनको झोलले बन्ने परतका कारण साङ्ला सास लिन नसकेर म र्छ ।
के गर्ने? – एउटा भाँडोमा नुहाउने साबुनको झोल तयार गर्ने । स्याम्पु मिसाउँदा पनि हुन्छ । सांग्लाहरु भएको स्थानमा यो झोल छर्किने । सांग्लाहरु भाग्न नपाउन भनेर चारैतिर झोलको अलि चौडा घेरा बनाउँदा पनि हुन्छ ।अब यो झोल सांग्लामाथि छर्किने । सांग्ला भाुग्न खोज्छन् । केही म र्छ न्। भाग्न खोजेका सांग्लामाथि यो झोल छर्किँदै जाने । लुगा धुने साबुन भन्दा नुहाउने साबुन डिटोलको झोलले यो छिटो म र्द छन्। यस बाहेक अन्य उपायहरु यसप्रकार छन्ः
ल्वाङः ल्वाङको गन्ध ल्वाङ पनि साङ्ला भगाउने उत्तम उपाय हो । साङ्ला धेरै लाग्ने ठाउँमा ल्वाङका केही टुक्रा अथवा धुलो राखिदिनुहोस् । यस उपायबाट साङ्ला भाग्छ।
तेजपत्ताको प्रयोगः तेजपत्ताको गन्धसँग साङ्ला भा’ग्ने गर्छ । त्यसैले केही पत्ता साङ्ला धेरै बस्ने कुनामा राखिदिनुहोस् । यसको गन्धले साङ्ला आफैँ भा’ग्ने गर्छ । तर, एउटै पत्ताले लामो समय काम नगर्ने भएकाले केही हप्ताको अन्तरमा त्यसलाई बदल्नुपर्छ । सोडा र चिनी कचौरामा बराबर मात्रामा सोडाको धुलो र चिनी मिसाएर कक्रोच धेरै बस्ने ठाउँमा राख्नुहोस् । चिनीको गुलियोले कक्रोचलाई आकर्षित गर्छ, त्यसलाई खाएपछि सोडाले मा र्ने काम गर्छ । समय–समयमा यसलाई पनि परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ ।
मट्टीतेलः मट्टीतेलको प्रयोग मट्टीतेलको प्रयोगले पनि साङ्ला भ’गाउन सकिन्छ । तर, यो प्र ज्व ल न शी ल पदार्थ भएकाले प्रयोगमा निकै सजगता अपनाउनु जरुरी छ।
ओसमुक्त राख्नुहोस् – ओसिलो स्थान साङ्लाका लागि निकै अनुकूल मानिन्छ । त्यसैले तपाईंले आफ्नो कोठालाई ओसमुक्त राख्नुभयो भने पनि साङ्लाबाट केही हदसम्म मुुक्ति मिल्छ।
Manoj Poudyal September 26, 2021
यी हुन् भुटेको मकै खानुका फाइदा
के हो चट्याङ र कसरी बच्ने यसबाट?
enepal May 27, 2021 May 27, 2021
नियमित काजु खानुका यस्ता छन फाइदाहरु
enepal May 27, 2021
दुधको चिया होइन रोजौं कालो चिया!
enepal May 26, 2021
किन हुन्छ ग्यास्ट्रिक? यस्ता छन यसका लक्षण र उपचार विधि ?
enepal May 25, 2021 May 25, 2021